ရှဗ်ဗိဘာရာသ်ည The Night of Forgiveness | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
အို မွတ်စ်လင်မ်တို့ ………စာပေပညာဗဟုသုတဖြင့် ကမ္ဘာကိုထိန်းချုပ်ကြစို့
၁။ ပါမေါက္ခ အိစ်မာအီးလ် အလ် ဖာရူကီး၏ ကြေကွဲဖွယ်ဇတ်လမ်ီး click here…… ဒေါက်တာ ဖါရူကီး
၁။ တမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) ၏ အထုပ်ပတ္တိ် click here……တမန်တော် အစ္စမာအီးလ် (အ)
၂။ တမန်တော်အီဗရာဟီးမ် (အ) ၏ အထုပ်ပတ္တိ် click here……တမန်တော် အီဗရာဟီးမ် (အ)
၃။ တမန်တော်အလ်ယ်ဆအ် (အ) ၏ အထုပ်ပတ္တိ် click here……တမန်တော် အလ်ယဆအ်(အ)
၄။ တမန်တော်ရှိုအိုင်းဗ် (အ) ၏ အထုပ်ပတ္တိ် click here……တမန်တော် ရှိုအိုင်းဗ် (အ)
၅။ တမန်တော်ဆွာလေ့ဟ် (အ) ၏ အထုပ်ပတ္တိ် click here……တမန်တော် ဆွာလေ့ဟ် (အ)
၆။ မွတ်စ်လင်မ်ကျော်ကြား ပညာရှင်များ ဒေါက်တာ ဂျက်ဖရီ လဲန်ဒ် click here…. ဒေါက်တာ ဂျဖ်ရီ လဲန်ဒ်
၇။ မွတ်စ်လင်မ်ကျော်ကြား ပညာရှင်များ အလ်မာဝါရ်ဒီ click here….်အလ်မာဝါရ်ဒီ
၈။ မွတ်စ်လင်မ်ကျော်ကြား ပညာရှင်များ ဟမ်ဇာယူစွပ် click here….ဟမ်ဇာယူစွပ်
၉။ မွတ်စ်လင်မ်ကျော်ကြား ပညာရှင်များ အမီနာ အစ်လမီ click here….အမီနာ အစ်လမီ်
၁၀။ မွတ်စ်လင်မ်ကျော်ကြား ပညာရှင်များ ဒေါက်တာ ဇာကိရ်နိုက် click here….ဒေါက်တာ ဇာကိရ်နိုက်
၁၁။ ဟဂ်ျ အစ္စလာသ် သာသနာဝင်တို့၏ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် click here….ဟဂ်ျ အကြောင်း
၁၂။ အီဒွလ်ဖိသိရ် ခွသ်ဘဟ် click here…. အီဒွလ် ဖိသိရ်
၁၃။ ရမ်ဇာန်၊ သရာဝီဟ် နှင့် လိုင်လသွလ်ကဒရ်ညမြတ်အတွက် ခွတ်ဘဟ် click here….သရာဝိဟ်၊ ကဒရ်ည
၁၄။ ရမ်ဇမ်လ၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်းနှင့်အခြားဆောင်ပါးများ click here…. ရမ်ဇာန်ဆောင်းပါးများ
၁၅။ ရှဗ်ဗိဘာရာသ်နေ့အကြောင်း အထူးတင်ပြချက်click here….ရှဗ်ဗိဘာရာသ်
၁၆။ မေ့ရာဂ်ျခရီး ရဂျဗ်လ ၂၇ ရက်နေ့ည အထူး တင်ပြချက် click here…..မေ့ရာဂ်ျခရီး
၁၇။ တမန်တော်ချုပ်မိုဟမ္မဒ် (စွ) ၏ အထုပ်ပတ္တိ် click here……တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွ)
Read more…… click here….ဟဂ်ျ အကြောင်း
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် စူရာ ၁၀၃ (အစရ်) တွင် အမိန့်တော်လာရှိသည်မှာ “ အကြင်သူတို့မှတစ်ပါး ထိုသူတို့သည် (အီမန်) သက်ဝင်ယုံ ကြည်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းအပြင် ကောင်းမြတ်သော အကျင်သီလ များကိုလည်း ကျင့်မူဆောက်တည်ခဲ့၏။ ထို့အပြင် အချင်းချင်း မှန်ကန်သော (သာသနာပေါ်၌ ကြံ့ခိုင်စွာ) တည်ရှိကြရန်လည်း ဆုံးမကြကုန်၏။ ထိုမှတပါး ၄င်းတို့သည် သည်းခံကြရန်လည်း အချင်းချင်း ဆုံးမကြကုန်သတည်း။ ”ဆက်လက်ပြီး အခြားစူရာများတွင် လာရှိသည်မှာ (အို-မွတ်စ်လင်မ်အပေါင်းတို့) အသင်တို့သည် လူခပ် သိမ်းတို့အဖို့ (တရားဓမ္မ ညွှန်ကြားရန်အလို့ငှာ) ထွက်ပေါ် လာ ကြကုန် သော အကောင်းဆုံးသောသာသ နာ ၀င်လူစုပင် တည်း။ (အကြောင်းမူကား) အသင်တို့သည် ကောင်းမြတ် သော ကိစ္စများ ကို (ပြုလုပ်ကြ ရန်) ညွှန်ကြားကြသည့်ပြင် စက်ဆုပ် ရွံ့ရှာဖွယ် ရာများမှလည်း မြစ်တားကြကုန်၏။ ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့ သည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် ကိုလည်း ယုံကြည်ကြကုန်၏။ အလ်အိမ်ရာမ်း ( ၃း၁၁၀)
ဒအ်ဝဟ်အင်မြန်မာ ၀ဘ်ဆိုဒ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မွတ်စ်လင်မ်များ အကျိုးကို မျှော်ကိုးလျှက် မှန်ကန်သော အစ္စလာမ် သာသနာ၏ အဆိုအဆုံးအများကို တင်ပြရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ)၏ ဟဒီးဆ်တော်အရ အသင်တို့ အတွင်း မည်သူမဆို အစ္စလာမ်သာသနာကို စည်းပူးကာ အခြားသူများကို ပြန်လည် ဖြန့်ဝေသူသည် အကောင်းဆုံး သူဖြစ်သည်ဟူသော စကားရပ်နှင့် ငါ၏ အမိန့်တော်များမှ တစ်ခွန်းပင်ဖြစ်စေ အခြားသူ များကို ဖြန့်ဝေကြလော့ ဟူသော အမိန့်တော်များကို အကောင်းအထည်ဖေါ်သည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။ အထူး သဖြင့် ———–၁။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ဘာသာပြန်နှင့် အဖွင့်သဘောတရားများ၊